February | 2013 | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 27/02/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: မိုးေခါင္ ဧလိယ.	1 Comment
၃ရာ ၁၈း၄၁-၄၅ တွင်
ထို့နောက်မှ ဧလိယက မင်းကြီးသည်၊ စားသောက်ခြင်းငှါ တက်သွားပါလော့။ များစွာသောမိုး ရွာမည့် အသံရှိသည်ဟု အာဟပ်အား ပြောဆိုလျှင် အာဟပ်သည် စားသောက်ခြင်းငှါ တက်သွား ၏။ ဧလိယသည် ကရမေလ တောင်ပေါ်သို့ တတ်၍ မြေ၌ ပျက်ဝပ်လျက် မျက်နှာကို ဒူးကြားမှာ ထားလျက် မိမိကျွန်အား သင်တက်၍ ပင်လယ်ဘက်သို့ ကြည့်ရှုလော့ဟု ဆိုသည့်အတိုင်း၊ ကျွန် သည်တတ်၍ ကြည့်ရှုလျှင် အဘယ်အရာမျှ မရှိပါဟု ပြောဆို၏။ ဧလိယက ခုနှစ်ကြိမ် တိုင်အောင် သွား၍ ကြည့်ရှုဦးလော့ဟု ဆို၏။ ခုနှစ်ကြိမ် မြောက်သောအခါ လူလက်နှင့် တူသော မိုးတိမ်ငယ် တစ်ခုသည် ပင်လယ်ထဲက တက်ပါ၏ဟု ဆိုသော် အာဟပ်မင်းထံသို့ သွားလော့။ မိုးရွာ၍ ဆီးတား မည်ကို စိုးရိမ်စရာ ရှိသောကြောင့် မင်းကြီး ပြင်ဆင်၍ ပြန်သွားမည် အကြောင်း လျှောက် ထားလော့ဟု မှာလိုက်လေ၏။ မကြာမမြင့်မှီ မိုးကောင်းကင်သည် မိုးသက်မုန်တိုင်း နှင့် မည်း ၍ ပြင်းစွာ မိုးရွာ၏။ (၃ရာ ၁၈း၄၁-၄၅)
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု ကပ်ဘေး ကျရောက်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့အားလုံး ထိုကဲ့သို့သော ပြဿနာ အတွေ့အကြုံ မရှိကြပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် ရက်အနည်းငယ် (သို့) လ အနည်း ငယ် လောက် မိုးမရွာခြင်း၊ ရာသီဥတု ပြင်းထန်ခြင်း စသည့် အတွေ့အကြုံလောက်ကို လူတိုင်း ခံစားဘူးပါသည်။ သို့သော် (၃) နှစ် (၆) ပတ်လုံး မိုးမရွာသည်ကို တော့ သင်ကိုယ်တိုင် စဉ်းစား ခံစားကြည့်ပါ။ တကယ် မလွယ်ကူသည့် အမှု ဖြစ်ပါသည်။
ဣသရေလ ကလေးငယ်များသည် မုန့်ခွက်ထဲမှာ ဂျုံနယ်မှု မပြုနိုင်ဘဲ၊ အစားအစာ မလုပ်ရသည်မှာ ကြာလှပေပြီ။ မိုးရွာထဲမှာ ထွက်၍ မကစားနိုင် သည်မှာ ကြာလှပေပြီ။ ရွံ့ရုပ်ကလေးတွေ လုပ်ပြီး ကစားသည် ဆိုသည်မှာ ဘာမှန်းပင် မသိတော့ချေ။
ထိုသူတို့သည် ခြောက်သွေ့ခြင်း နှင့် ငြီးငွေ့ခြင်းကိုသာ ခံစားနေရသည်။ စိုက်ပျိုးသော်လည်း အကျိုးတရား မခံစားရ။ လုပ်သ မျှ အောင်မြင်မှု အကျိုးကို မခံစားရနိုင်။
ကျွန်တော်တို့ ခရစ်ယာန်များတွင် ထိုကဲ့သို့ ခံစားချက်မျိုး ရှိနိုင်ပါသည်။ အသက်တာတွင် မိုးခေါင်သကဲ့သို့ ခံစားနေရသည့် အချိန်များ ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်ပြောသော ထိုကဲ့သို့ ခံစားမှု မျိုး သင်ခံစားဘူးပါသလား။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ထိုကဲ့သို့ ခံစားမှုမျိုး ခံစားဘူးပါသည်။
ထမင်းစားဘို့ အတင်းဆုတောင်းခဲ့သည်။ သို့သော် ငတ်မွတ်ခြင်းကိုသာ ခံစားခဲ့ရသည်။
ဘတ်(စ်)ကားခအတွက် ဆုတောင်းခဲ့သည်။ သို့သော် ခြေလျှင်သာ လျှောက်ခဲ့ရသည်။
အ၀တ်အစား အတွက် ဆုတောင်းခဲ့သည်။ သို့သော် အစုတ်ကလေးနှင့်သာ ကျေနပ်ခဲ့ရသည်။
စသည်ဖြင့် ပြောပြမည်ဆိုလျှင် အကြောင်းအရာများက ပြော၍ မကုန်နိုင်တော့။
ကျွန်တော်တို့အတွက် မိုးခေါင်းသည့် နေ့ရက်များပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
ထိုအခြေအနေကို ဆာလံဆရာ ကိုယ်တိုင်က မှတ်တမ်းတင်ဘူးပါသည်။ ဆာလံ ၃၂း၎ တွင်ဖြစ်သည်။
“နေ့ညဥ့်မပြက် ကိုယ်တော်၏ လက်သည် အကျွန်ုပ်အပေါ်မှာ လေး၍ အကျွန်ုပ်၏ ချွေးရည် သည် နွေကာလ၌ သွေခြောက်ခြင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ပါ၏။”(ဆာလံ ၃၂း၎)
ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ ခံစားဘူးသည် ဆိုသည့်တိုင်အောင် ထိုသူတို့ကဲ့သို့ မဟုတ်ချေ။ ကျွန်တော် တို့သည် ယခုအခါ ကောင်းမွန်စွာ သွားလာနိုင်ကြသည်။ ချီးမွမ်းနိုင်ကြသည်။ ထိုင်နိုင်ကြသည်။ တီဗွီ ကြည့်နိုင်သည်။ အိပ်ပျော် နိုင်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ကလေးများသည် ဆော့ကစား နိုင်ကြသည်။ ပျော်ရွှင် မြူးတူး နိုင်ကြသည်။ ဣသရေလ လူမျိုးတို့ ၏ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး မှုများသည် ထိုအခြေအနေများ အားလုံး ပျောက်ဆုံး နေကြသည် မဟုတ်ပါလား။
ပရောဖတ်ကြီး ဧလိယ ကိုယ်တိုင် ထိုအခြေအနေကို သိထားပါသည်။ သို့သော် ထိုပြဿနာသည် အမြဲတမ်း ဖြစ်နေမည်တော့ မဟုတ်။ ထိုအမှု အရာသည် ဣသရေလ လူမျိုးတို့တွင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ဖြစ်သည့် အဖြစ် အပျက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့ လည်း သိထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ခြောက်သွေ့ခြင်းဆိုသည်မှာ အမြဲထာဝရတော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။
ငြီးငွေ့ခြင်းဆိုသည်မှာ အမြဲတမ်းတော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။
မြုံသည် (ကျိုးစားအားထုပ်သမျှ မဖြစ်ထွန်း) ဆိုသည်မှာ အမြဲတမ်း မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဘုရားသခင်သည် နေပူမှ အရိပ်သို့ ပြောင်းပေးပါသည်။
ခြောက်သွေ့ခြင်းမှ ဧမြခြင်းသို့ ပြောင်းပေးပါသည်။
မြုံခြင်းမှ ပွားများခြင်းသို့ ပြောင်းပေးပါသည်။
ညှိုးငယ်ခြင်းမှ လန်းဆန်းလှပခြင်းသို့ ပြောင်းပေးနေပါသည်။
မြစ်ရေသည် ဆက်လက် စီးဆင်း ပါတော့မည်။ လေပြေသည် ဆက်လက် တိုက်ခတ်ရန် ပြင်ဆင်နေပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်သည် သင်၏ အသက်တာထဲမှ မိုးခေါင်ခြင်းကို ရွေ့လျားစေပါတော့မည်။
ထိုခြောက်သွေ့ခြင်းသည် လက်ရှိကာလတွင် တစ်ယောက်ခြင်းစီ အပေါ်တွင် ရှိနေတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အသင်းတော် အပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ ကျွန်တော်တို့၏ အမှုတော်မြတ် အပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအပေါ်တွင် လည်းကောင်း ရှိနေတတ်ပါသည်။
ထိုအခြေအနေကို အခြားသူများ ခံစားရသကဲ့သို့ ဧလိယ ကိုယ်တိုင်လည်း ခံစားရပါသည်။ ၁ရာ ၁၇း၆-၇ တွင် ဖေါ်ပြသည်မှာ ဧလိယ မှီခို သောက်သုံး နေသော ချောင်းရေကလေးက ခန်းခြောက်သွား သဖြင့် နေရာ ပြောင်းရွှေ့ ခံရပါသည်။ သို့သော် ဧလိယ ကိုယ်တိုင် သိရှိသည်မှာ ထိုအခြေအနေသည် အဆုံး မဟုတ် ဆိုသည်ကိုတော့ နားလည်နေပါသည်။
ကျွန်တော် ဤမျှလောက် နိဒါန်းပျိုး ပြောဆိုနေသည်မှာ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ထိုကဲ့သို့ မိုးခေါင်းခြင်း အခြေအနေကို ခံစားနေနိုင် သည်ကို ရှင်းလင်းစွာ မြင်တွေ့ ခံစားနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် ကာယ (ဇာတိ) ပိုင်းတွင် ကောင်းမွန် အဆင်ပြေ နေသည့် တိုင် ဝိညာဉ်ရေးရာပိုင်းတွင် မိုးခေါင်းနေနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော် အနှစ်သာရကို မခံစားရသူ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင် ပါသည်။ သို့သော် ထိုပြဿနာများသည် ဘုရားသခင်၏ ပြက္ခဒိန်တွင် အစဉ်အမြဲ ရှိနေလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ သင်၏ အသက်တာမှ မိုးခေါင်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဝိညာဉ်ရေး မိုးခေါင်းခြင်းကိုလည်းကောင်း ဖယ်ရှား တိုက်ထုပ်ပစ်ရန် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်ဘုံမှ စီစဉ်လျက် ရှိသည်ကို သိစေချင်ပါသည်။
အခန်းငယ် (၄၁)တွင် ဖေါ်ပြသည်မှာ
ထိုနောက်မှ ဧလိယက၊ မင်းကြီးသည် စားသောက်ခြင်းငှါ တက်သွားပါလော့။ များစွာသော မိုးရွာမည့် အသံ ရှိသည်ဟု အာဟပ်အား ပြောဆိုလျှင် (၃ရာ ၁၈း၄၂၁)
အထက်ပါ စကားကို ပြောဆိုသည့် အချိန်တွင် တကယ် မိုးမရွာသေးပါ။ အလွန် ခြောက်သွေ့ ပူပြင်နေချိန် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အပူချိန် ၄၅ံ စင်တီဂရိတ် မှ ၅၀ံ စင်တီဂရိတ် ပင် ကျော်မည်လား မပြောနိုင်ပါ။ ခြေလှမ်းတိုင်တွင် မြက်ခြောက်ပင်များက ထွက်သည့် အသံကိုပင် ကြားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုခြေလှမ်းတိုင်းတွင် ဖုန်မှုန့်များက လေထဲတွင် ဝဲလွင့်နေပြီး အသက်ရှုလိုက်တိုင်း ဖုန်အနံတွေကို ရှူရှိုက်နေ ရပါလိမ့်မည်။ တိရစ္ဆာန် အသေကောင်တွေ ကိုလည်း မြင်တွေ့နေရပါ လိမ့်မည်။ ခြံစည်းရိုး အပြင် ဘက်က တိရစ္ဆာန်ကလေးတွေကလည်း နံရိုး အပြိုင်းပြိုင်းနှင့် ရေတွက်လို့ပင် ရနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဤသည်မှာ မိုးခေါင်မှု၏ ဆိုးရွားမှုများသာ ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် အဟာရ ချို့တဲ့နေပါသည်။ သင်သည် အားနည်း နေပါသည်။ သင်သည် ရောဂါ ဝေဒနာများ ခံစားနေရပါသည်
သို့သော် ထိုအခြေအနေဆိုးထဲတွင် ဘုရားသခင်၏ လူက ပြောလိုက်သည်မှာ “များစွာသော မိုးရွာမည့် အသံရှိသည်” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
သင် ကိုယ်တိုင် ထိုအခြေအနေကို ခံစား နားလည်နိုင်ပါသလား။ ယခုတွင် ဘာမျှ မရှိသေး။ မည်သည့်အရာမျှ မဖြစ်သေး။ သို့သော် ထိုအရာ၏ အခြားတစ်ဘက်တွင် ကျွန်တော်တို့ တစ်စုံတစ်ရာကို ကြားနေရပါသည်။ ခံစားနေရပါသည်။
စာတန် နတ်ဆိုးက သင့်ကို ပြောနေသော စကားမှာ “ငါမင်းကို ဖျက်စီးပစ်လိုက်မယ်။ မိုးခေါင်မှုထဲမှား မင်းဟာ အားလုံး ပျက်စီး သွားမယ်။” ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သင်သည် ချက်ခြင်း ပြန်လည် ပြောဆိုရမည်မှာ “မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလို မင်းလုပ်လို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အလွန်အားကြီးတဲ့ မိုးရွာမည့် အသံကို ငါကောင်းကောင်းကြားနေရတယ်။” ဆိုပြီး ပြန်ပြောလိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် အခြေအနေ အမျိုးမျိုးတွင် ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်လွှတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းရ မည် ဖြစ်ပါ သည်။
ဧလိယ ကပြောလိုက်သည်မှာ “ရေဖျန်းသလို ဖျန်းမှာမဟုတ်၊ ရေပတ်သလို ပတ်လိုက်မှာ မဟုတ်” “များစွာသော မိုးရွာမည့်အသံ ရှိပါသည်။” ဟု ပြောလိုက်သည်မှာ ရင်ခုန် လှုပ်ရှားဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။
ကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြချက်အရ မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကမျှ ထိုမိုးသံများကို မကြားရပါ။ ဧလိယ တစ်ဦးတည်းသာ ထိုအသံကို ကြားနေရပါသည်။ ဧလိယ၏ ကျွန်ရင်းဖြစ်သောသူပင်လျှင် ထိုအသံကို မကြားရချေ။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ယေရှုက ပြောခဲ့သည်မှာ “ကြားစရာနား ရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားရပါစေ” (လုကာ ၁၄း၃၅) ဟု ပြောခဲ့ပါ သည်။
ထိုအသံကို နားထောင်နေသောသူသာလျှင် ကြားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်၏ နှလုံးသားထဲသို့ ကြေးနန်း ပို့သကဲ့သို့ ပို့လိုက်ပြီး သင်က ထိုအသံကို သာမန် နားဖြင့် ကြားရမည်မဟုတ်ဘဲ နှလုံသား နားဖြင့် ကြားနာရမည်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုအသံကို သင်အမှန်တကယ် ကြားသိပြီ ဆိုပါက မကြာမီ မိုးရွာချေတော့မည်။ ဘုရားသခင် ချိန်ချက်သော အချိန်တွင် သင်ရှိသော နေရာတွင် အကြီး အကျယ် မိုးရွာချေလိမ့်မည်။ ထိုမိုးသည် သင်၏ အပေါ်တွင်လည်းကောင်း (သို့) သင်၏ မိသားစု ထံတွင်လည်းကောင်း (သို့) သင်၏ အခြေအနေများတွင်လည်းကောင်း (သို့) သင်၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွင် လည်းကောင်း၊ သင်၏ အသင်းတော်တွင်လည်းကောင်း၊ သင်၏ အမှုတော် လုပ်ငန်းတွင်လည်းကောင်း၊ သဲသဲမဲမဲ ရွာချေတော့မည်။ ကောင်းကြီး မိုးဟု ခေါ်ရမည် လားမသိပါ။
ထိုကဲ့သို့ မိုးရွာမည့် အသံကို ဧလိယ တစ်ဦးတည်းသာ ကြားနေရပြီး တပည့်ဖြစ်သူက မည့်သို့မျှ ကြားလည်း မကြား မြင်လည်း မမြင်ခဲ့ခြေ။ ထို့ကြောင့် တပည့်ကို ပင်လယ်ဘက်သို့ ကြည့်ခိုင်းလိုက်လေသည်။ တပည့်ဖြစ်သူက “အဘယ်အရာကိုမျှ မမြင်ပါ” (၃ရာ ၁၈း၄၃) ဟုသာ အကြောင်းပြန်ခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ ဧလိယ မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသနည်း။ ဧလိယ စိတ်မညစ်ပါ။ ဝမ်းမနည်းပါ။ အားမငယ်ပါ။ ဒေါသမထွက်ပါ။ မငြီးတွားခဲ့ပါ။
ဘုရားသခင်သည် ဧလိယကို အမှန်တကယ် မိုးရွာမည် ဆိုသည့်အကြောင်းကို ပြောပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။ (၃ရာ ၁၈း၁) ထိုအသံကို ဧလိယက ကြားထားပြီး ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင် အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်မည်ဟု သိထားသောကြောင့် စိတ်ချမှု အပြည့်အဝ ရှိနေခဲ့ပါသည်။ အမှန်တကယ် မိုးရွာပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် မိန့်ကြား ထားသောအကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအသံကို နှလုံးသားနှင့် နားထောင်နေသော ဧလိယ တစ်ဦးတည်းသာ သိပါသည်။ ကြားပါသည်။ သင့် မိသားစုကလည်း ကြားချင်မှ ကြားပါလိမ့်မည်။ သင့် ပတ်ဝန်ကျင်က လူတွေ ကြားချင်မှ ကြားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင် ရှိသော နေရာမှ မိုင်ပေါင်း ထောင်ချီ၍ ရှိနိုင်ကြသော်လည်း ဘုရား သခင်ကို မျှော်လင့် အသက်ရှင်သော သူများအနေဖြင့် ထိုအသံကို ကြားနိုင် ကြပါသည်။ ကြားနေကြပါလိမ့်မည်။
တပည့်ဖြစ်သူကို ခြောက်ကြိမ်တိုင်အောင် အဖန်ဖန် ကြည့်ခိုင်းသော်လည်း မည်သည့် အရိပ်အရောင်မျှ မမြင်တွေ့ခဲ့ရချေ။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ လူကတော့ ထိုအသံကို ကြားနေရပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူကြားသည့် အတိုင်း မကြာမီ ဖြစ်လာခြေ တော့မည်။ ထို့ကြောင့် အာဟပ် ဘုရင်ကို သတိပေးရန် လူတစ်ယောက်ကို စေလွှတ်လိုက်လေတော့သည်။
“အာဟပ်မင်းထံသို့ သွားလော့။ မိုးရွာ၍ ဆီးတားမည်ကို စိုးရိမ်စရာ ရှိသောကြောင့် မင်းကြီး ပြင် ဆင်၍ ပြန်သွားမည့် အကြောင်း လျှောက်ထားလော့ ဟု မှာလိုက်လေသည်။ (၃ရာ ၁၈း၄၄)
စာတန်သည် ဧလိယ၏ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကစားစရာ သဖွယ် ကစားနေခဲ့ပုံရပါသည်။
ပထမအကြိမ် အာဟပ်ကို “မြန်မြန် သွားပါ။ မိုးရွာလိမ့်မည်” ဟု ပြောခဲ့စဉ်က မည်သည့် အရိပ်အရောင်မျှ မမြင်တွေ့ခဲ့ရ။ မကြားခဲ့ရ။ ထိုသို့ ပြောခဲ့စဉ်က အမှန်တကယ် မကြား မမြင်ခဲ့ရလျှင် ထိုမိုးခေါင်မှု ကြီးသည် ရွေ့လျား ပျောက်ကွယ် သွားမည် မဟုတ်။ ဆက်လက် ရှိနေဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကြားခဲ့ မြင်ခဲ့သောကြောင့်သော ဧလိယက အခိုင်အမာ ဆိုနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် မိုးခေါင်းမှုထဲတွင် ရှိနေစဉ်တွင် အခန်းငယ်လေးတွင် ဆုတောင်းနေသည်။ အကောင်းဆုံး အသက်ရှင်သည်။ ကျမ်းစာဖတ်သည်။ အသင်းတော်ကို သစ္စာရှိစွာ မှန်မှန်တတ်သည်။ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးသည်။ သို့သော် မည်သည့် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာမျှ မရရှိခဲ့။ တစ်ခုခု ကောင်းသည့် အရာလည်း မရှိခဲ့။ ကျန်မာခြင်းလည်း မရှိခဲ့။ အခြေအနေများက မည်သို့မျှ ပြောင်းလဲ မသွားခဲ့ချေ။ အလွန်းဆိုးရွားလှပါသည်။
ထိုအခြေအနေကို မိုးခေါင် နေသည် ဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ အသင်းတော်သို့ ပုံမှန်သွားသော်လည်း ဘာမျှ မဖြစ်။ တရားဟော ချက်များကို နားထောင်သော်လည်း ဘာမျှ မရ။ သီချင်းတွေ ပုံမှန်ချီးမွမ်းနေလည်း မည်သို့မျှ ဝမ်းမြောက်ခြင်း မခံစားရ။ ထိုအခြေ အနေတွင် သင့်ဘက်မှာ ယုံကြည်ခြင်း ပျက်ပြားမသွားပါစေနှင့်။
ထိုအခြေအနေတွင် သင်၏ ယုံကြည်ခြင်းကို မည်မျှ ခက်ခဲနေသည်ဖြစ်ပါစေ ဆက်လက် တည်ဆောက်ပါ။ မည်သည့်အရာမျှ မမြင်၊ မည်သည့်အရာမျှ မကြား။ မည်သည့်အနံ့မျှ မရသည့်တိုင်အောင် ယုံကြည်ခြင်းကို ဆက်လက် တည်ဆောက်ပါ။
သင်ဆုတောင်းပြီးရင် ဆက်လက် ဆုတောင်းနေပါ။ ဘာမျှ မရသော်လည်း ဆက်လက် ဆုတောင်းနေပါ။ သင့်၏ ယုံကြည်ခြင်းကို အမြင့်ဆုံးသော တောင်ထိပ်ပေါ်အထိ တွန်းပို့ပါ။ အမြင့်ဆုံးမှာ ရှိနေပါစေ။ ဘာမျှ ဖြစ်မလာရင်လည်း ဆက်လက် ယုံကြည်ပါ။ ဘာမျှ ဖြစ်မလာဘူး။ ဘာမျှ ဖြစ်မလာဘူး။ ဘာမျှ ဖြစ်မလာဘူး။ ဘာမျှ ဖြစ်မလာဘူး။ ဘာမျှ ဖြစ်မလာဘူး။
ဧလိယ ကတော့ (၆) ကြိမ်တိုင်အောင် ကြည့်၍ ဘာမျှ ဖြစ်မလာသော်လည်း ယုံကြည်ခြင်းကတော့ ပျောက်ပျက်မသွားခဲ့ပါ။
ထာဝရ ဘုရားကို မြှော်လင့်သောသူတို့မူကား အားပြည့်ကြလိမ့်မည်။ ရွှေလင်းတကဲ့သို့ မိမိတို့ အတောင်ကို အသစ်ပြုပြင် ကြလိမ့်မည်။ ပြေးသော်လည်း မပင်ပန်း ခရီးသွားသောအခါ မမောရကြ။ (ဟေရှာယ ၄၀း၃၁)
သင်၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင် မြင့်မားလှသော တောင်ထိပ်ထိရောက်အောင် ဆက်လက်ပို့ဆောင်ပါ။ ဘယ်သော အခါမျှ ကျဆင်းသွားခြင်း မရှိပါနှင့်။
ပထမ ခြောက်ကြိမ်စလုံးတွင် စိတ်ပျက်စရာ အားမရစရာ သတင်းစကားကိုသာ ရရှိခဲ့သော ဧလိယသည် အကြိမ်ကြိမ် သူ၏ ယုံကြည်ခြင်းကို မြင့်သထက် မြင့်လာအောင်သာ တွန်းတင်ခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့် နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ် ဖြစ်မလာလျှင် စိတ်ဓါတ်ကျ အားငယ် ဝမ်းနည်းတတ်ကြသည်။ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပင် စိတ်ပျက်စရာ ရှိသော်လည်း အားမငယ်၊ ဝမ်းမနည်းဘဲ ဆက်လက်၍ ယုံကြည်ခြင်း မျှော်လင့်ခြင်းတို့ဖြင့် ဆက်လက် အားယူပါ။
ဧလိယသည် ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းလိုက်၊ ထပ်မံ ကြည်ခိုင်းလိုက်၊ ထပ်မံဆုတောင်းလိုက်၊ ထပ်မံ တစ်ခါ ထပ်တက်လိုက်၊ အကြိမ်ကြိမ် လုပ်ဆောင်ပြီးသောအခါ နောက်ဆုံးတွင် တိမ်ရိပ်ကလေးကို မြင်ရလေတော့သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မိုးရိပ်ကို မြင်နေရပါပြီး၊ မိုးခေါင်မှု မကြာမီ ပြီးစီးပါတော့မည်။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာတွေ မကြာမီ စီးဆင်းလာ ပေတော့မည်။
အခန်းငယ် ၄၅ တွင် “မကြာမမြင့်မှီ မိုးကောင်းကင်သည် မိုးသက်မုန်တိုင်းနှင့် မည်း၍ ပြင်းစွာ မိုးရွာ၏။” ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။
(၇) ကြိမ်တိုင်အောင် ယုံကြည်ခြင်းကို မြှင့်တင် တည်ဆောက်ကာ ပင်လယ်ဘက် မျှော်ကြည့်ခဲ့ရသော အရာသည် ယခုအခါ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်အသရေတော်ကို ကြားပြောပါတောသည်။ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်ကို ဖော်ပြနေလေတော့သည်။ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ကို လူတိုင်း ခံစားရလေတော့သည်။
ဘာမျှမရှိခြင်း၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ကြည့်ရှုခြင်း
ဧလိယသည် “ဘာမျှမရှိပါ” ဟု အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ကြားခဲ့သော်လည်း “တစ်ဖန် ပြန်လည် ကြည့်ရှုပါ။” ဟုဆိုကာ အကြိမ်ကြိမ် စေ လွှတ်ခဲ့သည်။
သို့သော် နောက်ဆုံးအကြိမ်တွင် “မိုးတိမ်ငယ်တစ်ခု ပင်လယ်ထဲက တက်လာပါ၏” ဟု ပြောသံကြားသောအခါ “တစ်ဖန်ပြန်ကြည့်ပါ” ဟု ထပ်မံ စေခိုင်းခြင်း မပြုတော့ပါ။ ထိုသို့ ပြောမည့်အစား “ မိုးရွာ၍ ဆီးတာမည်ကို စိုးရိမ်စရာ ရှိသောကြောင့် မင်းကြီး ပြင်ဆင်၍ ပြန်သွားမည့်အကြောင်း လျှောက်ထားလော့” ဟု ပြောခိုင်းလိုက်ပါသည်။
ကျမ်းစာက ပြောသည့်အတိုင်း ဆိုရလျှင်
“ထာဝရ ဘုရား၏ လက်တော်သည် ဧလိယအပေါ်မှာ ရှိ၍ သူသည် ခါးပန်းကို စည်းလျက် အာဟပ်မင်း အရင် ယေဇယေလမြို့ တံခါးဝသို့ ပြေးလေ၏။”(၃ရာ ၁၈း၄၆)
သင်၏ အသက်တာတွင် ဘုရားသခင် ရွာစေသည့်မိုး ရွာပြီဆိုပါက သင့်အပေါ်တွင်လည်း ဝိညာဉ်တော် အုပ်စိုး သဖြင့် ဘယ်နေရာ ကို သွားမည်ဟု ပြောစရာပင် မလိုဘဲ သင့်ကို ဝိညာဉ်တော်ကသာ ရွေ့လျားစေလျက် ဘုရားသခင် ၏ ဘုန်းအသရေတော်က အလုပ်လုပ် ဆောင်နေ မည် ဖြစ်ပါ သည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင် ရွာစေမည့် မိုးအတွက် ပြင် ဆင်ထားကြပါစို့။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘာမျှ မရှိခြင်း၏ အခြား တစ်ဖက် အတွက် ပြင်ဆင်ထားကြပါစို့။ ကျွန်တော်တို့၏ နားများကို ကောင်းကင်သို့ လှည့်ကြပါစို့။ ကြီးစွာသော မိုးရွာမည့် အသံကို နှလုံးသားဖြင့် ကြားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြပါစို့။ အသက်တာထဲက မိုးခေါင်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းတော့မည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ ဘဝ အသက်တာ ထဲတွင် ကြီးစွာ သော ကောင်းကြီးမိုးများကို သွန်းလောင် ရွာသွန်းစေတော့ မည်။ ယုံကြည် လျက် မျှော်လင့်ကြပါစို့။